vendredi, 01 décembre 2017 08:46
Palais des Sports Mahamasina: Salon de l'Agro
Tontosaina etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina nanomboka omaly 30 novambra ny Salon de l'Agro, ary hiifarana amin'ny faran'ny herinandro.
vendredi, 01 décembre 2017 08:36
Palais de sport: Fifanaovan-tsonia amin'ny Fanofanana an’ireo Tanora Entrepreneurs
Notontosaina omaly alakamisy 30 novambra ny fanaovan-tsonia teo amin’ny ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena sy ny BIT, tao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina.
Fanofanana an’ireo Tanora Entrepreneurs latsaky ny 18 taona, ka ny tanjona amin’izany dia ny famolavolana ireo tanora mba tsy hirona amin’ny zavatra hafa toy ny fifohana zava-mahadomelina.
Ny toeram-pihofanana moa dia eny CARION .
vendredi, 01 décembre 2017 06:51
Antsiranana: Hampiantrano ny fihaonambem-paritry ny HVM ny 15-16 desambra
Taorian’i Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina ary Toliara dia fantatra izao fa hotanterahina eto Antsiranana ny 15 sy 16 desambra ho avy izao ny fihaonambem-paritry ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM).
Nahazo fampilazana ireo sekolim-panjakana eto an-toerana, fa hampiantrano ireo mpizaika amin’io fihaonambem-paritry ny HVM io, vaovao izay nanaitra ny teto Antsiranana satria raha ny fepetra nambaran’ny teo anivon’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena ombieny ombieny, dia tsy azo andraisana hetsika ny sekolim-panjakana raha tsy mahakasika ny fampianarana ihany.